Umzi-mveliso weenqwelo moya zangaphambili uyathengiswa eLondon nge- £ 6.5 yezigidi - Ipropathi
Umzi-mveliso weenqwelo moya zangaphambili uyathengiswa eLondon nge- £ 6.5 yezigidi
UBrendan Cox / uSavill
Ukuba ujonge ukuthenga ipropathi ye-quirky ke unethamsanqa, ngononophelo Ukulungiswa kwakhona kwefektri yenqwelomoya kuthengiswa kuyo ICricklewood, eLondon, nge- $ 6.5 yezigidi.
Okwangoku iqulathe izithuba ezithathu ezahlukileyo zorhwebo, iWotton Works iyafikeleleka ngomnyango ongena ngesango ngeemitha ezingama-30 zokuqhuba zabucala. Ilungele ukuthoba isilayidi sembali yaseBritane, izinto zentsusa zibandakanya iijoists zentsimbi eziveziweyo (RSJs), iifestile ezinqabileyo, izitena eziluhlaza, kunye nomxube wekhonkrithi, i-resin kunye ne-oki phantsi.
Ngamagumbi okulala amahlanu anesisa, amagumbi okuhlambela amane kunye nendawo yokuhlala egcwele ukukhanya, ngokuqinisekileyo ngekhe ubenexhala lokucinezela wonke umntu ngaphakathi. Ingagcina ubuhle beshishini, kodwa ikhaya ligcwele zizityalo (ezininzi zazo), ezikhanyayo -Izitulo zentambo, iingobozi zaselwandle kunye neeseti zefenitshala yanamhlanje.
Amagumbi acwangciswe ngokukodwa, uninzi lomgangatho wokuqala uyilelwe ngaphakathi kwindawo evulekileyo yesicwangciso 'seofisi'. Intloko ephezulu kwaye uya kukhubeka kwilayibrari, kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokuncedisa, kunye nakwesinye isitudiyo. Nokuba ujonge indawo eguquguqukayo okanye ufuna iphedi efanelekileyo yokonwabisa, iWotton Works ibetha indawo.
Elona candelo lethu silithandayo yintendelezo yangaphakathi eqaqambileyo, evakalelwa ngathi yindawo entle encinci yokuhlala kude nobomi besixeko. I-Jam-igcwele izityalo ezininzi, sesona sibatha selanga.
'Le propati iya kulungela umsebenzisi wokugqibela onomnqweno wokuhlala nokusebenza kwisakhiwo esinye,' wongeza uGiles Elliot, iarhente yepropathi kwaSavills.
Ukuphoswa nje kwelitye ukusuka eGladstone Park enomtsalane, abanini abatsha bayakonwaba kukwazi ukuba bayonwabele iindonga zayo igadi , iinkundla zentenetya kunye nekhefi nanini na befuna. Ukufumana i-buzz encinci, iSitishi seCricklewood soLoliwe sinika ukufikelela ngokulula kwiWest End, iSitishi sasePaddington kunye neBond Street.
Le propati ngoku ikwimakethi ye- $ 6,500,000 nge Ugcino .
Uhendiwe? Thatha ukhenketho ngeenxa zonke ekhaya ...
UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill UBrendan Cox / uSavill
Landela Indlu entle ivuliwe I-Instagram .
ukuxhoma imifanekiso ngaphandle kwezikhonkwane
I-15 yeetafile zangaphandle ezinesitayile zokuthenga igadi yakho
Ngaphakathi kumakhaya ajongwa kakhulu eZoopla ka-2021 ukuza kuthi ga ngoku
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda ngezantsi kwe-2 izindlu zokuhlala ezidibeneyo ezithengiswayo eMzantsi Cornwall
Ingqungquthela ye-G7: Ukukhangelwa kwepropathi kabini eCarbis Bay Amakhaya ama-5 athengiswayo awuyi kukholelwa ukuba ase-UK
Izinto eziphambili ezingama-40 zokuthenga kuqala kubathengi bokuqala
Iflethi yaseKate Middleton yangaphambili yaseLondon iyathengiswa
Ikhaya langaphambili likaTim Burton liyathengiswa
Ikhaya langaphambili likaSting eliseLondon liyathengiswa
Indlu kaMargot Fonteyn yangaphambili yaseLondon iyathengiswa
Jonga olu tshintsho lwecawa lunomdla luyathengiswa
Hlala kwi-TS. Ikhaya likaEliot langaphambili likaMarylebone
Elf eshelufini naughty
Ukuthena imithi yomthi wemali
ukuthumela izipho zokubulela
Ipeyinti yodonga emnyama engwevu
flip up iitafile zekofu